Thursday June 16, 2022 - 11:46:09
Sawir Sheekh Mahad Warsame oo lahadlay Channel4
Sheekh Mahad Warsame oo wareysi siinayay warbaahinta Channel4 ee laga leeyahay dalka Ingiriiska ayaa sheegay in ay sii wadayaan dagaalka ka dhanka ah ciidamada shisheeye iyo maleeshiyaadka dowladda Federaalka.
Wuxuu tibaaxay in marnaba aysan raalli ka noqon doonin in dalka Soomaaliya lagu maamulo Dastuur ayna dilayaan cid walba oo faafinaysa wax khilaafsan Shareecada Islaamka.
"Annagu maadaama aan nahay dad muslimiin ah dimuquraadiyadda iyo muslim meel mawada galaan dimuquraadiyaddu waxaa weeyaan xukunkaan shacabka ayaa iska leh, Annaguna waxaan aaminsannahay xukunka Rabbi ayaa iska leh"ayuu yiri Sheekh Mahad.
Mar wax laga weydiiyay suurtagalnimada in ay lawareegaan Soomaaliya sidii Taliban ay Afghanistan ula wareegtay oo kale ayaa rejo ka muujiyay in Shabaabul Mujaahidiin ay hantaan dalka islamarkaana ay ku maamulayaan Shareecada Islaamka isagoona ugoodiyay shisheeyaha iyo maleeshiyaadka la shaqeeya.
"Insha'Allaah Waxa aan hiigsanayno weeyaan in aan Soomaaliya qabsanno" ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Sheekh Mahad oo dowladda Mareykanka ay dul dhigtay lacag dhan 5 milyan dollar ayaa meesha ka saaray in wadahadal ay lagalaan dowladda Federaalka Soomaaliya oo uu sheegay in aysan u aqoonsaneyn nidaam dowladnimo "Anagga sideedaba nimankan dowlad kama aaminsanin,cumuumana cid kasta oo ay shareecada ilaaheey noo diiday inaan la hadalno, lahadli mayno Ciddii ilaaheey shareecaddiisa noo bannaysay inaan la hadalno, waan la hadli doonaa marka waqtigeeda ” sidaas waxaa yiri Sheekh Mahad Warsame.
Xarakada Al Shabaab ayaa gacanta ku haysa inta badan dhulka Soomaaliya ee dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya, awooddan jihaadiga ah ayaa taxaddi weyn ku ah ciidamada shisheeye iyo maleeshiyaadka Soomaalida ee la shaqeeya.